Maxkamadda ugu sarreysa wadanka oo maanta soo gabagabeyn doonto dacwadda ka dhan ah guddoomiyaya Wajeer – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
STN News February 16, 2019 Leave a comment
Maxkamadda ugu sarreysa wadanka ee Supreme Court ayaa 2-da duhurnimo ee maanta la filayaa inay go’aan kama dambeys ah ka soo saarto dacwadda ka dhan ah barasaabka ismaamulka Wajeer Maxamad Cabdi Maxamuud oo in muddo ah soo jiitameysay.
Maalmo ka hor ayay maxkamaddu sheegtay inay kiiskaasi soo afjari doonto ka hor 21-ka Febraayo in kastoo ay markii dambe shaacisay in maanta oo jimco la ogaan doono cidda ay 8-dii bishii sideedaad ee sannaadkii 2017-kii guusha saxda ah raacday.
Waxay sido kale maxkamaddu ka jawaabtay warbixin lagu qoray mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa gudaha wadanka taasi oo lagu sheegay inay garsoorayaasha dib u sii dhigayaan inay go’aan kama dambeys ah ka soo saaraan dacwaddaasi .
Bayaanka Supreme Court ayaa lagu xusay in xaaladu aynan ahayn sida loo dhigay oo dhageysiga dacwadda ka dhanka ah guushii barasaabka Wajeer Maxamad Cabdi Maxamuud uu soo billowday 21-kii bishii koow iyo tobnaad ee sannadkii hore sidaasi awgeed aynan weli dhamaan mudada ku qeexan dastuurka wadanka u degsan ee kiiska lagu soo gabagabeyn karo taasi oo ah saddex bilood.
Dacwadda go’aanka laga soo saarayo maanta oo jimco ah ayaa waxaa maxkamadda uy gudbiyay barasaabkii hore Axmad Cabdullahi iyo Axmad Muxumad oo labaduba jagadaasi loolan u galay oo ku doodaya inuunan si cadaalad ah ku soo bixin.
Sido kale waxay shaki geliyeen shahaadooyinkaasi waxbarasho ee jaamacadeed oo ay sheegeen inay yihiin kuwo been abuur ah.
Xaakiinada kala ah David Maraga, ,Philomena Mwilu, Jackton Ojwang’, Maxamad Ibraahim Njoki Ndung’u, Smokin Wanjala, iyo Isaac Lenaola ayaa lagu eedeyay inay ka cagajiidayaan inay soo afjaraan kiiska la hor geeyay waxaana looga fadhiyaa amarka ay soo saari doonaan.
Dhanka kale guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa xayiraad saaray aqoontiyo banhiyeed oo la sheegayo inuu leeyahay mid ka mid ah ehelada barasaabka Wajeer Maxamad Cabdi Maxamuud.
Qoraalka EACC ayaa lagu sheegay inuu jiro qorsho ay qeyb ka yihiin xubnaha qoyska guddoomiyaha oo la doonayay in ismaamulkaasi looga dhaco 26 milyan oo shilin .
Lacagtan ayay EACC sheegeysa in qorshuhu uu ahaa in lagu soo iibiyo laba baabuur oo cusub in kastoo lagu qarash geliyay oo keliya hal gaari oo celis ah kaasi oo qiimihiisu sara loo qaaday .
Sido kale EACC ayaa intaasi ku dartay in 12 milyan oo shilin loo weeciyay dhanka akoontiga xaaska mid ka mid ah eedeysanayaasha in kastoo aanan weli la ogayn sababta falkaasi ka dambeysay.
Waxay wararku intaasi ku darayaan in baaritaano lagu hayo baabuurkii horay loo soo isticmaalay ee mar kale lagu iibsaday 14 milyan.
Guddiga EACC ayaa intaasi ku daray in 26-da milyan aynan qeyb ka ahayn miisaaniyaddi la ansaxiyay ee ismaamulka Wajeer sannadkii 2017/2018-kii.
Hasa ahaate barasaabka maamul goboleedka Wajeer Maxamad Cabdi Maxamuud ayaa bayaan uu soo saaray ku gacan seyray baaritaanada oo uu ku tilmaamay mudo aanan sal iyo raad lahayn, xilli aanan habbooneyn lagu soo beegay sido kalena dano siyaasadeed laga leeyahay.
Waxaa uu intaasi ku daray in ujeedada laga leeyahay arrimahan ay tahay inay saameyn ku yeeshaan go’aanka isaga ka dhan ah ee ay maxkamadda Supreme Court soo saareyso galinka dambe ee maanta
← Diyaarado Dagaal Oo Duqaymo Culus Ka Fuliyey Degaanka Ceel-Cadde Oo Katirsan Gobolka Gedo
20 ka tirsan ciidamada Hindiya oo lagu dilay Gobolka Kashmiir →